सपनाको शहर, विदेशको कोसेली - स्मृतिसंग्रह | Smritisangraha
सपनाको शहर, विदेशको कोसेली
मनभरि सपनाको ठूलो भारी बोकेर बिदेशिएको ऊ गएको वर्ष दिन नपुग्दै मृत्युको खबर आउदा परिवारलगायत गाउँ नै शोकमग्न भयो । यद्यपि विहे गरेको २ महिना पुग्दा नपुग्दै छाडेर गएको श्रीमानको मृत्युको खबरले सहन गाह्रो होला भन्ने हेतुले उनलाई थाह दिइएको थिएन । मान्छेहरु खासखुस गर्दै टिठ्याउथे । विचरी उनलाई के थाह ? सधैंझैं उही मन्द मुस्कानमा प्रतिक्रिया दिन्थिन् । उनको यो अञ्जान निर्दोषितामा परिवारका सदस्यहरु आँखाबाट पिल–पिल आँसु झार्थे । केही भन्दैनथे । आखिर सत्य कति समय लुकाउन सकिन्थ्यो र ? खबर पाएको महिना दिनमै उसको निर्जीव शरीर आइपुग्यो ।
उनी गोठालोबाट आउदै थिईन् । बाटैबाट घरमा मानिसहरुको भीडभाड देखी । कता–कता मनमा चिसो पस्यो । शंका–उपशंकाले मनमा डेरा जमाउन थालिसकेको थियो । जति नजिक पुग्यो, उति मनले ढ्यांग्रो ठोकिरहेको थियो । मानिसहरु उनलाई हेर्दै मुख बाउन थालेका थिए । के भएको हो, सोध्ने हिम्मत उनमा थिएन । अनर्थको संकेतले फतक्कै गलिसकेकी थिईन् । पाइलाहरु अगाडि बढ्न मानिरहेका थिएनन् । उनलाई देख्नेवित्तिकै परिवारका अन्य सदस्यहरु डाँको छोडेर रुन थाले । अब भने केही सूईंको पाइन् र भीड छिचोल्दै उनी सकी–नसकी केही पाइला के अघि बढेकी थिईन्, प्रलय भयो । आकाश खस्यो, टेकेको धर्ती भासियो । सपना हो या विपना ? उनले छुट्याउनै सकिनन् । आगनमा लाम्चो काठको बाकसभित्र आफ्नै श्रीमानको मृत शरीर लम्पसार पारेर राखिएको थियो । उनी त्यही ढलिन्, डंरङै । भीडभरि कोलाहल मच्चियो–
“लौन ! छिटो पानी ल्याऊ ।”
“विचरी ! वेहोस भएर ढली ।”
मुर्छाबाट ब्युँझदा वरिपरि थुप्रै मानिसहरु थिए । कसैले उनलाई पानी खुवाउदै थिए, कसैले हम्किरहेका थिए । कोही रोइरहेका थिए । ढुंगा–माटोसमान भइसकेको श्रीमानको पार्थिव शरीरमा शिर राखेर बेस्सरी रोईन् उनी । सायद त्यतिबेला उनले पोखेका वेदनाहरुको सारांश यस्तै थियो–
“वाचा ललो, जुग थोबा बिसी यालो
तो तदिईमो चुर्, थोरे म्होरा किसी यालो
खले टिले ङ
तारे ङै तो लब, तम्लो सिलेई ङ ।
म्हिस–त्हयाँ, क्हिलई न मेसी टिलो
खेम खलई बिसी ङ प्रेसी टिलो
सेंसी टिलो, कते ताँमे भिउ बिसी
सेंभरिर्बे, सेंब मायाँ पिउँ बिसी
तारे खले, चु जुनी थोल खामो
म्लेकी किंसी, कते दिन सोल खामो
बरु तोकोई, भोदो छ्यो प्रेई ङलई
खेदो क्ररेई, झरी म्हेउ चु ट लाई
सोसी ङै तो लब, तम्लो सिलेई ङ ।”
(मातृभाषा, स्थानीय गुरुङ भाषामा सानो प्रयास गरेको छु । ठाउँ अनुसारको लवज र स्थानीय बोलीचालीको पृथकताले गर्दा भाषिक अशुद्धतालाई नकार्न सकिदैन । भाषागत अज्ञानता हावी भएको पनि देखिन सक्छन् ।)